(SAWIRRO) Guddiga nabad gelyada gobolka Nugaal oo amar kasoo saartay shirarka siyaasadeed ee lagu qabanayo Garowe. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Guddiga nabad gelyada gobolka Nugaal oo amar kasoo saartay shirarka siyaasadeed ee lagu qabanayo Garowe.
(Garowe) Guddiga amniga gobolka Nugaal oo maanta isu’gu yeeray warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa dowliga ah ee ka howgalla Garowe, ayaa ku wargaliyay amar kasoo baxay oo ku saabsanaa shirarka siyaasadeed ee caasimmadda lagu qabayo.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal. Cabdisalaam Xasan Xirsi (Gujir), ayaa saxaafada u akhriyay qoraal kasoo baxay guddiga nabad gelyada oo lagu mamnuucayo inaan la qaban karin shir aan lagusoo wargalin guddiga nabad gelyada.
Guddoomiyaha ayaa saxaafada ka dalbaday inayan baahin shirar wax u dhimi kara ammaanka iyo midnimada Puntland, isagoo caddeeyay warbaahintii ka dhaga adaygta amarka guddiga in loo aqoonsanaandoono inay qeyb ka tahay foodada, tilaabana laga qaadidoono.
Wasiirka warfaafinta Puntland, Cabdi Xisri Cali qarjab oo shirkaan goob joog ka ahaa ayaa sheegay amarkaan kasoo baxay guddiga amniga inuusan ahayn mid cid gaar ah lagu caburinayo, balse uu yahay mid lagu ilaalinayo nabad gelyada cid kasta oo Garowe ku shiraysa.
Wasiirku wuxuu sheegay in lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorashooyin loo diyaar garoobayo loona baahan yahay in gacan bir ah lagu qabto amniga iyo xasiloonada Puntland, iyadoo laga digtoonanayo in cid dano gaar ah wadata ay waxyeelo ugeysata midnimada Puntland.
Taliyaha xasilinta gobolka Nugaal, sareeye guuto, Muxidiin Axmed Muuse, ayaa sheegay guddiga nabad gelyada inuu u xilsaaran yahay inuu kahor tago wax kasta oo loo arki karo inay ka dhalankarto qatar xagga ammaanka la xiriira, wuxuuna saxaafada ka codsaday inay masuuliyad iska saaraan nabad gelyada guud ee Puntland.
Guddoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee MAP, Maxamed Daahir Caynsane, ayaa sheegay warbaahintu inay diyaar u tahay ayna masuuliyad gaar ah ka saaran tahay inay ilaaliyaan sharafta iyo wadajirka Puntland, laakiin wuxuu hay’adda amniga ka codsaday inaan lagu xad gudbin xorriyada iyo madax banaanida saxaafada Puntland.
Halkaan ka daawo sawiradda kulanka.